Sidina Belize avy any Seattle sy Los Angeles amin'ny Alaska Airlines izao
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Sidina Belize avy any Seattle sy Los Angeles amin'ny Alaska Airlines izao
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Belize • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Vaovao • People • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Sidina Belize avy any Seattle sy Los Angeles amin'ny Alaska Airlines izao.
Belize dia manolotra fahafahana mahafinaritra ho an'ny fianakaviana, miahy ny tontolo iainana - manomboka amin'ny nosy malaza ka hatramin'ny ala mikitroka sy toerana tranainy. Ary akaiky kokoa noho izay mety ho eritreretinao: Avy any LA dia adiny dimy monja ny sidina, ary adiny enina avy any Seattle.
Raha mitady toerana iraisam-pirenena handosirana ianao – miaraka amin'ny fifangaroan'ny tora-pasika, aventure ary vakoka tsy dia lavitra loatra amin'ny morontsiraka Andrefana – fotoana izao handinihana an'i Belize miposaka masoandro. Mba hanamora ny fandrindrana ny dia, Alaska Airlines nanomboka ny fanompoana tsy an-kiato androany nankany Belize City avy any Seattle (SEA) sy Los Angeles (LAX).
Avy any an-drenivohitr'i Belize, ny lanitra no fetran'ny fikarohana sy fialamboly. Noho ny fitakiana mafy ny sidina mankany Belize ary manorina amin'ny fanambaranay mialoha ny serivisy ara-potoana amin'ny ririnina, Seranam-piaramanidina Alaska ankehitriny dia mikasa ny hanidina ny lalana Los Angeles-Belize City isan-taona.
“Nandritra ny roapolo taona teo ho eo ny tsenan'i Belizean dia tao amin'ny radary. Faly izahay fa nanokanana serivisy avy any Seattle sy Los Angeles izao, "hoy i Brett Catlin, filoha lefitry ny tambajotra sy ny fiaraha-miasa ao amin'ny Alaska Airlines. "Belize manolotra fahafaha-manao mahafinaritra ho an'ny fianakaviana, miahy ny tontolo iainana - manomboka amin'ny nosy malaza ka hatramin'ny ala mikitroka sy toerana tranainy. Ary akaiky kokoa noho izay mety ho eritreretinao: avy any LA dia adiny dimy monja ny sidina, ary adiny enina avy any Seattle.
“Ankoatra ny fisarihana fampiasam-bola lehibe kokoa sy ny renivola maha-olona, ​​ity sidina vaovao ity dia hanentana ny fizahan-tany izay tena ilaina ihany koa Belizeny fanambinana. Tonga amin'ny fotoana tena mety izany satria mampitombo ny ezaka fanarenana ny indostria", hoy i Hon. Anthony Mahler, Minisitry ny Fizahantany sy ny Fifandraisana Am-pielezana. "Noho izany dia manome lanja ny fiaraha-miasa amin'ny Alaska Airlines izahay amin'ny fanomezana fifandraisana tena ilaina ho an'ireo mpandeha avy any amin'ny morontsiraka Andrefana liana amin'ny famelomana indray ny tenany sy miala sasatra amin'ny vatosoa tropikaly ary miroboka amin'ny traikefa ara-kolontsaina manankarena sy miavaka."
Asa fanompoana any Alaska Belize miasa in-efatra isan-kerinandro eo anelanelan'i Los Angeles sy Belize City (BZE) ary indroa isan-kerinandro eo anelanelan'ny Seattle sy Belize City - amin'ny fotoanan'ny fialantsasatra.
manomboka faran'ny Pair City miainga tonga Frequency fiaramanidina
Nov. 19 Taona-fihodinana LAX - BZE 11: 00 am 5: 30 ora M, W, F, Sa 737-800
Nov. 20 Taona-fihodinana BZE - LAX 10: 00 am 1: 30 ora T, Th, Sa, Su 737-800
Nov. 19 Enga anie 21 RANOMASINA - BZE 8: 30 am 4: 35 ora F, Sa 737-800
Nov. 20 Enga anie 22 BZE - RANOMASINA 11: 00 am 3: 55 ora Sa, Su 737-800